နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄ | 2017 ၏စာမျက်နှာ3NAB သတင်းများ | 89 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » နိုဝင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 3)
အလုပ်အမှုဆောင်လက်ထောက် / ရုံး Manager ကိုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Austin, 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် TX Duration: ပေးမလစာပေးမယောဘကိုအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမသင်ရုပ်မြင်သံကြားများအတွက်နက်ရှိုင်းသော, လိုက်နာချစ်ခြင်းမေတ္တာပါနဲ့, အတွင်းစိတ်ဝင်စားကြောင်း သို့မဟုတ်သုံးဦးစလုံး - ဖြစ်ရပ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, rarefied စည်းရုံးရေးကျွမ်းကျင်မှု၏ -workings? ကျနော်တို့အဖွဲ့ဝင်သစ်ကြိုဆိုဖို့ရှာကြသည် ...
အသံအော်ပရေတာကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration:3ရက်သတ္တပတ်လစာ $ 325.00 ပြားကြေးယောဘအလုပ်အင်ဒီရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီ၎င်း၏ပထမဆုံးခရစ္စမတ်ဒီဒီဇင်ဘာလ play ထုတ်လုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လက်ရှိအသံအော်ပရေတာများ၏အနေအထားအဘို့အပလီကေးရှင်းကိုလက်ခံနေကြတယ်။ အသံအော်ပရေတာတစ်ခုချင်းစီကိုစွမ်းဆောင်ရည်ကာလအတွင်းအသံကဘုတ်လည်ပတ်ပါလိမ့်မယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ဇယား ...
အလင်းရောင်ဒီဇိုင်နာ / အော်ပရေတာ
အလင်းရောင်ဒီဇိုင်နာ / အော်ပရေတာကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration:3ရက်သတ္တပတ်လစာ $ 425 ယောဘအလုပ်အင်ဒီရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီ၎င်း၏ပထမဆုံးခရစ္စမတ်ဒီဒီဇင်ဘာလ play ထုတ်လုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လက်ရှိ Lighting ဒီဇိုင်နာ / အော်ပရေတာများ၏အနေအထားအဘို့အပလီကေးရှင်းကိုလက်ခံနေကြတယ်။ အလင်းရောင်ဒီဇိုင်နာ ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဇာတ်ရှိုးအလင်းဒီဇိုင်းပါလိမ့်မယ် ...
အယ်ဒီတာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Philadelphia တွင်, PA ဆိုပြီး Duration: TBD လစာ TBD ယောဘကိုကျနော်တို့ကဒီဆုရဝဘ်စီးရီးရာသီနှစ်ခုတစ်ခုအတွေ့အကြုံရှိအယ်ဒီတာရှာကြံနေတဲ့အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းခုနစ်ခုဖြစ်စဉ်များရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကရုပ်မြင်သံကြားစတိုင်ပုံစံတည်းဖြတ်ချစ်သောသူနှင့်ဒေသခံသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ , စိတ်ဝင်စားပါလျှင် ...
ထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Austin, လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘပေးမ TX Duration: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာ post ကိုထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ add ဖို့ထုတ်လုပ်သူရှာကြသည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်သူနောက်ဆုံးပေးပို့မှတဆင့်ကနဦးလေလံကနေတိုတိုနှင့်တာရှည် format နဲ့စီမံကိန်းများကြီးကြပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးခိုင်သမိုင်းရှိပါတယ် ...
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Editor ကိုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Austin, TX Duration: လစာ $ 20- $ 30 အလုပ်ချိန်နာရီယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကျနော်တို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး, တွေးခေါ်ရှင်များနှင့်ပရဟိတလုပျငနျး၏စုပေါင်းများမှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား စိန်ခေါ်မှုနှင့်ကြိုတင်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ဇာတ်လမ်းပြောပြမှတဆင့်တီထွင်ဆန်းသစ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြန့်နှံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မီဒီယာမိတ်ဖက်, အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တူသောစိတ်နှင့်အတူအလုပ်မလုပ် ...
motion ဂရစ်ဖစ်အဆိုတော်ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Culver စီးတီး,, CA Duration: Freelance လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘဟိုင်းအဲဒီမှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်! ငါထလာမယ့်အနည်းငယ်စီမံကိန်းများအတွက် MOTION graphics အယ်ဒီတာရှာနေတာ! (အမျှအစောပိုင်းယခုအပတ်အဖြစ်!) ** -Motion ဂရစ်ဖစ်, 2D / 3D, အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်ဤသည်မှအခပေး Gig နှင့်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည် *** အတှေ့အကွုံရှိရမည် ...
ထုတ်လုပ်မှု Assistant ကုမ္ပဏီအဆိုပါ Everglades တောရိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ (Ewa) စီးတီး, ပြည်နယ် Fort Lauderdale, FL Duration: Open ကိုလစာက Non-paid (မျှ / အနိမ့် paid / ကော်မရှင်သာ) 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကိုယောဘ theallianceartproject ... ။ ထိုးဖောက်မျိုးစိတ်တစ်ခုတိုးပွားလာထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ရှာကြံခြင်းဖြင့်ထွက်သုတ်ခံရမှအ Everglades အတွက်ဇာတိတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်တင်ကူညီရန်ကြိုးစားနေအလုပ်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းကအကြောင်းဝေမျှမယ်။ အတှေ့အကွုံကောင်းတဲ့သော်လည်း ...
3 ၏စာမျက်နှာ 89«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»